Mariela Carril | 09/09/2021 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 09/09/2021 18:14 | အကြံပေးချက်များ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
အ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၎င်းတို့သည် emirates အုပ်စုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက်ပါဝင်သည် ဒူဘိုင်း။ ယခုအချိန်သည်၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖီဆန်သော၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလေဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော၎င်း၏တည်ဆောက်မှုများအတွက်အလွန်နာမည်ကြီးလာသည်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ဒူဘိုင်းကတော့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအနေနှင့်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှမည်သူမဆိုလေးစားရမည့် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံနည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။ ဒီနေ့သူတို့နဲ့တွေ့မယ်၊ ဒါကြောင့်ဆောင်းပါးအကြောင်းပါ ဒူဘိုင်းမှာဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်မလဲ။
ငါပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ နာမည်အရင်းကမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ emirate ပါ နာမည်ကျော်နှင့်ကြွယ်ဝသောပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ကမ်းခြေ၌မရ။ သမုဒ္ဒရာ၏သစ်ကိုင်းတစ်ခုသည်မြို့ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားသည်။ ပင်လယ်နှင့်မနီးမဝေးတွင်ရှိသောဤမြေများမှဒေသခံများသည်ပုလဲများစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမပြုလုပ်မီအချိန်ထိပင်၎င်း၏တည်နေရာကြောင့်၎င်းသည်အလိုရှိသောနယ်မြေဖြစ်ခဲ့သည် ဗြိတိသျှလက်ထဲရောက်နေတာနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်ရှိပြီဆိုတာသူသိတယ်။
ဒါဟာခဲ့ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် emirate သည်၎င်း၏ကြွယ်ဝသောရေနံမြေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် နောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်သူသည်ယူအေအီးကိုပုံဖော်ရန်အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ မင်းရဲ့လက်ရှိအစိုးရဘယ်လိုနေလဲ။ အဲဒါကတစ်ခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူ ဦး ရေများစွာမရှိပါ ၎င်း၏လူ ဦး ရေအများစုသည်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်သည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်လုပ်သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၊
ဒူဘိုင်းသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့ဆီမရှိပေ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကွဲပြားစေရန်စဉ်းစားနေသည်၊ ထို့ကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရာတွင်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့ကအစပိုင်းကိုပြန်သွားတာ၊ ဒါကမွတ်ဆလင်ပုံစံအတိုင်းဘဲ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့သူတွေကအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးတွေပါ အပူဆုံးရာသီဥတုတွင်သက်တောင့်သက်သာနှင့်ပေါ့ပါးသောအဝတ်အစားများကို ၀ တ်လေ့ရှိသည်။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံနှစ်ခုသည်တူညီခြင်းမရှိ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်ဟူသောအချက်မှာလည်းမှန်သည်။ မူအရစည်းကမ်းသည်မည်သို့ဖြစ်သည်ကိုသင်မမြင်မချင်းအချို့နေရာများတွင်သင်၏လက်များ၊ ခြေထောက်များနှင့် ဦး ခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောလက်ကိုင်ပုဝါသည်အမြဲလက်မှာရှိသည်။
ယခုအခါဒူဘိုင်းမြို့သည်ခေတ်မီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအဝတ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ မပိတ်တော့ပါ၊ နိုင်ငံခြားသားများများစွာရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဘောင်းဘီတိုမှဘရာကာစအထိအဝတ်အစားမျိုးစုံကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုတွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်သောနေရာများ၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေသည် လေးစားပါ၊ ခြေချင်းဝတ်များနှင့်ပခုံးများကိုအုပ်ပါ။
မင်းမှာရှေးစကားတွေကိုလိုက်နာဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင် "မင်းဘယ်သွားသွားမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းလုပ်" ဤနေရာများသည်သင်အနည်းဆုံးပြဿနာကြုံရမည့်နေရာများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ရမဿွာန်လ၏ပြင်ပခရီးတစ်ခုကိုသွားလျှင် မင်းကပိုကြော့ရှင်းတဲ့နေရာမှာညစာစားဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်၊ အဲဒီအခြေအနေမှာအဝတ်အစား ၀ တ်သင့်တယ်။
ကမ်းခြေလား? ပြီးတော့ beachwear ကိုကမ်းခြေမှာသာဝတ်သည်မရ။ ဒီနေရာမှာကမ်းခြေသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရေချိုးအ ၀ တ်တွေ ၀ တ်တာ၊ တနေကုန် flip-flop လုပ်တာမျိုးကိုမင်းဒီမှာမလုပ်နိုင်ဘူး။ အခုကမ်းခြေမှာ သင်ကရေကူးဝတ်စုံ၊ ရေကူးဝတ်စုံကိုတစ်ထည်တည်း ၀ တ်နိုင်သည်။ကမ်းခြေမှာရော၊ ရေကူးကန်တွေ၊ ရေပန်းဥယျာဉ်တွေမှာရော။ သိသာ၊ ဗလာ၊
ဒါပေမဲ့ ဤနေရာများမှဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒူဘိုင်း၏ရှေးအကျဆုံးခရိုင်သို့လမ်းလျှောက်သွားလျှင်၊ ရိုးရာစျေးများသို့မဟုတ်ဗလီသို့သွားလျှင်၊ ဆိုလိုသည် မင်းသတိထားရမယ်။ အဲဒါကမင်းရဲ့ကမ္ဘာမှာသာမကပြည်ပမှာပါချက်ချင်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒေသခံလူမျိုးများနှင့်သူတို့၏ဓလေ့ထုံးစံများသည်မကြာမီသင့်အား ၀ န်းရံလာလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်လေးစားမှုရှိရန်လိုသည်။ သင်သေချာနားမလည်သောအကြည့်များ (သို့) မှတ်ချက်များကိုရှောင်ချင်လျှင်သူတို့ကပိုသတိထားလိမ့်မည်။
ဦး သန့်သွားရတော့မယ် ဗလီတစ်ခုကိုသွားကြည့်တယ်မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူများထံမှလာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ် ဦး စလုံးသည်၎င်းတို့၏ခြေထောက်များနှင့်လက်များကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်မရ။ အချို့ကမင်းဒီလိုဟိုတယ် ၀ တ်ထားခဲ့ရင်မင်းမှာအ ၀ တ်အစားတွေတောင်ရှိသေးတယ်။
ယခုဒူဘိုင်းတွင်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် သဲကန္တာရ သဲကန္တာရသို့ခရီးများစွာရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသောကြောင့်အချို့ကိုလုပ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘောင်းဘီတို၊ ဘောင်းဘီတိုဖြစ်ဖြစ် ၀ တ်ဖို့အမြဲအကြံပြုလိုတယ် capri ဘောင်းဘီ (ခြေထောက်တစ်ဝက်ကိုခွဲထုတ်နိုင်သည့်အရာများ) နှင့်ကြွက်သားထိပ်၊ ရှပ်အင်္ကျီ (သို့) ရှပ်အင်္ကျီ။ သရဏဂုံတည်ခြင်း၊ sunscreen နှင့် ဦး ထုပ်
နေ့တွင်သဲကန္တာရသည်အလွန်ပူ။ သင့်ကိုအများကြီးဖုံးလွှမ်းသောအ ၀ တ်များ ၀ တ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် ပူလောင်ခြင်းကိုမခံစားရပါမရ။ ၎င်းသည်အအေးဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်တစ်နှစ်၏အချိန်ပေါ်မူတည်သည်၊ သင်ညဘက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယူဆောင်လာရန်အကြံပြုသည်။ ဖိနပ်ပိတ်လိုက်ပါ။
အမျိုးသမီးများရင်ဘတ်၊ လက်မောင်းနှင့်ပေါင်များမပြနိုင်လျှင် အမျိုးသားများသည်လည်းရင်ခေါင်းဗလာနှင့်မလျှောက်နိုင်ပါ, သို့မဟုတ်အလွန်တိုသောဘောင်းဘီတို သို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တူအောင်ပြုလုပ်ထားသောရေကူးဝတ်စုံ ဘောင်းဘီတို၊ ဘောင်းဘီတို၊ တိုတို၊ ၀ တ်စုံ၊ အတွင်းခံအရိပ်အယောင်မရှိ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်တယ်ဆိုရင်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုမှ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဆွေးနွေးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကားအဘယ်နည်း။ ငါတို့ကဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ဖြတ်သန်းနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်အမှားတစ်ခုကြောင့်ငါတို့ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားပြီးသူတို့အာရုံစိုက်မိရင်ငါတို့တောင်းပန်သင့်တယ်။ ဘယ်သူမှရဲကိုမပူးပေါင်းချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိဖို့လုံလောက်တယ်။
ထို့ကြောင့်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ ဒူဘိုင်းတွင် ၀ တ်ဆင်ပုံ၏အခြေခံအကျဆုံးအချက်များ လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများတွင်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ခေါင်းကိုဖုံးရန်မလိုပါ၊ ဗလီများတွင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးဒူးခေါင်း၊ ပုခုံးမရှိ၊ ဘောင်းဘီတို၊ အင်္ကျီလက်တိုရှိရမည်၊ ရေကူး၊ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်နိုင်သည်။ ၊ ဘာမှသိပ်ထုတ်ဖော်မပြဘူးမရ။ ညမှာဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဖော်ထုတ်တာကိုဖုံးကွယ်ဖို့လက်မှာကုတ်အင်္ကျီအမြဲတပ်ထားတယ်။ ပိုများသောရိုးရာဒေသများတွင်ငါတို့ပိုလမ်းလျှောက်လေ၊ ပိုကောင်းသောပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုကိုသွားလျှင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ယောက်ျားလား? သူတို့ကပိုလွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့အရာတွေကိုသိဖို့လိုသေးတယ်။ သူတို့သည်တိုလွန်းသောဘောင်းဘီတိုများကို ၀ တ်နိုင်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ပေမယ့်လည်းဟုတ်တယ် သူတို့သည်ပျင်းရိရမည်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်သို့သွားလျှင်ဘောင်းဘီရှည် ၀ တ်ရမည်။
ငါအဲဒါတွေကိုမလေးစားရင်တစ်ခုခုဖြစ်မလား။ တစ်ချို့ကလက်ခံခြင်းကနေသွားနိုင်တယ် ကြမ်းတမ်းသောမှတ်ချက်တစ် ဦး မှတဆင့်သွား ကြည့်မကောင်းဘူး သင်ရင်ဆိုင်ရသည်အထိ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အကျဉ်းထောင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ဒူဘိုင်းမှာဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်မလဲ